Haweenka iibiya khudaarta iyo hillibka ayaa saaka go'aan ku gaaray inay xiraan xarumahooda ganacsiga islamarkaana cabasho muujiyaan, muddose hadii ay socotay waxaa arrintaasi soo galay maamulka gobolka Nugal, iyagoo wadahadal la yeeshay dibad-baxayaasha madal ay goob joog ka ahaayeen waxgaradka iyo nabadoonno.
Shir iyo waraysi kadib waxaa la isku wafaqay in xarumaha dib loo furo islamarkaana maamulku dusha u rito in cabashadan wax laga qabto xukuumaddana loo gudbiyo.
Haweenkii mudahaaradayay qaybtood ayaa warbaahinta la hadlay waxayna cadeeyeen arrimaha laga wada hadlay wixii kasoo baxay, iyagoo sheegay in loo ballan qaaday wax ka qabashada arrintan islamarkaana sugayaan jawab dag dag ah.
Kor u kaca sarrifka doollarka ayaa kamid ah waxyaabaha xaaladda kiciyay islamarkaana keenayay inay danyartu maarayn weydo nolosha qoysaskooda wuxaana maanta $100 [Boqol dollar] lagu sarrifayay Labo Malyan iyo Shan boqol oo Kun Shilling Somalia, halka gacanta dambe marayso Labo Malyan iyo Lix Boqol.
Gudoomiyaha gobolka Nugal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa sheegay inay dadka cabanaya isku afgarteen in xarumihii la xiray dib loo furo islamarkaana dowladda loo gudbiyo cabashadan.
Intii banaanbaxo socotay waxaa jiray haween la xiray iyo kuwo la jir dilay.
GAROWE- Waxaa sii xoogaystay cabashada iyo banaanbaxyada looga soo horjeedo sicir barar soo food saaray sicirka wax kala iibsiga kaasi oo si gaar ah u taabtay dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada Puntland, kadib markii la daabacay lacago faalso ah islamarkaana ku ...
Puntland 02.05.2016. 14:05